လုံလောကျတဲ့ ဒဏျရာ ဒဏျခကျြတှလေဲ ရခဲ့ပွီးပါပွီ လှညျ့ထှကျနိုငျဖို့ အခြိနျတဈခုပဲ လိုတော့တာ - ONE DAILY MEDIA
ဒါကွောငျ့ မရှိရငျ မဖွဈဘူးဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ခဏခဏ မသုံးဖွဈတော့ဘူး မရှိမဖွဈမှနျးသိရငျ ပိုပွီး အနိုငျယူခငျြကွတာလေ သူငါ့ကို နားလညျခှငျ့လှတျပါလားလို့ တှေးကွတာထကျ ငါဘာလုပျလုပျ သူ ခှငျ့လှတျမှာပဲ ငါ မရှိလို့မှ မဖွဈတာဆိုပွီး အနိုငျယူတတျကွတယျကြှနျမလဲ လူပါ . . . သညျးခံတယျဆိုပမေယျ့ ဘယျအတိုငျးအတာထိ သညျးခံနနေိုငျမှာလဲ
ကြှနျမမှာလဲ ခံစားခကျြနဲ့ပါ ကိုယျ့ကို မလိုအပျတဲ့အရပျမှာ အကွာကွီးရပျနဖေို့ ဘယျအခြိနျထိ သတ်တျိတှေ ရှိမှာလဲ အခုအခြိနျမှာ မရှိမဖွဈဆိုပမေယျ့ နောကျတဈခြိနျ out of date လဲ ဖွဈခငျြဖွဈသှားနိုငျတာပဲ သညျးခံမှုတှေ တနျဖိုးထားမှုတှေ သဲထဲ ရသှေနျသလို ဖွဈသှားပွီမှနျးသိတဲ့တဈနေ့ ကြှနျမလဲ ဆငျခွငျတတျလာမှာပါမရှိရငျ မဖွဈဘူးဆိုတာ အရိုးသားဆုံး ၀နျခံလိုကျတာပါ ဘာလုပျလုပျ ငွိမျခံနဖေို့ ခှငျ့လှတျပေးပါမယျဆိုတဲ့ ကတိ ပေးလိုကျတာမဟုတျဘူး
သံတောငျ မီးပွငျးပွငျးနဲ့တှတေဲ့အခါ အရညျပြျောကသြေးတာပဲ ကြှနျမရဲ့ သညျးခံမှုတှကေော ဂရုမစိုကျမှုပေါငျးမြားစှာနဲ့တှတေဲ့အခါ ကုနျဆုံးမသှားနိုငျဘူးလား တဈနေ့ . . . .ဟိုးအဝေးကွီးရောကျသှားတဲ့ တဈနရေ့ောကျမှ တနျဖိုးသိတာမြိုး ပွနျပွီး လှမျးဆှတျတာမြိုးမလုပျပါနဲ့ ကြှနျမ လှညျ့ထှကျသှားတယျဆိုကတညျးက ကြှနျမမှာ ခံနိုငျရညျအငျအားမဲ့သှားလို့ပါ ဆကျပွီး နာကငျြနရေမယျ့ ဒဏျကို ထပျပွီး ခံနိုငျလောကျတဲ့ အငျအားမဲ့သှားတာပေါ့
မရှိမဖွဈလို့ စ​ပွီး ပွောမိကတညျးက ခြောငျထိုးခံလိုကျရတာ ကိုယျရှိမှနျး သတိမရတော့ဘူး ဘယျလိုအမှားတှပေဲ ဖွဈဖွဈ ဆကျပွီးခှငျ့လှတျနမှောပဲလို့ တဈယူသနျတှေးပွီး ကိုယျ့ဖကျမငဲ့ပဲအမှားတှဆေကျတိုကျလုပျပဈလိုကျတယျ
လုံလောကျတဲ့ ဒဏျရာ ဒဏျခကျြတှလေဲ ရခဲ့ပွီးပါပွီ လှညျ့ထှကျနိုငျဖို့ အခြိနျတဈခုပဲ လိုတော့တာ တဈနနေ့ေ့ တဈခြိနျခြိနျပေါ့ ။
ဒါကြောင့် မရှိရင် မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ခဏခဏ မသုံးဖြစ်တော့ဘူး မရှိမဖြစ်မှန်းသိရင် ပိုပြီး အနိုင်ယူချင်ကြတာလေ သူငါ့ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပါလားလို့ တွေးကြတာထက် ငါဘာလုပ်လုပ် သူ ခွင့်လွှတ်မှာပဲ ငါ မရှိလို့မှ မဖြစ်တာဆိုပြီး အနိုင်ယူတတ်ကြတယ်ကျွန်မလဲ လူပါ . . . သည်းခံတယ်ဆိုပေမယ့် ဘယ်အတိုင်းအတာထိ သည်းခံနေနိုင်မှာလဲ
ကျွန်မမှာလဲ ခံစားချက်နဲ့ပါ ကိုယ့်ကို မလိုအပ်တဲ့အရပ်မှာ အကြာကြီးရပ်နေဖို့ ဘယ်အချိန်ထိ သတ္တ်ိတွေ ရှိမှာလဲ အခုအချိန်မှာ မရှိမဖြစ်ဆိုပေမယ့် နောက်တစ်ချိန် out of date လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ သည်းခံမှုတွေ တန်ဖိုးထားမှုတွေ သဲထဲ ရေသွန်သလို ဖြစ်သွားပြီမှန်းသိတဲ့တစ်နေ့ ကျွန်မလဲ ဆင်ခြင်တတ်လာမှာပါမရှိရင် မဖြစ်ဘူးဆိုတာ အရိုးသားဆုံး ၀န်ခံလိုက်တာပါ ဘာလုပ်လုပ် ငြိမ်ခံနေဖို့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ ကတိ ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး
သံတောင် မီးပြင်းပြင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါ အရည်ပျော်ကျသေးတာပဲ ကျွန်မရဲ့ သည်းခံမှုတွေကော ဂရုမစိုက်မှုပေါင်းများစွာနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ကုန်ဆုံးမသွားနိုင်ဘူးလား တစ်နေ့ . . . .ဟိုးအဝေးကြီးရောက်သွားတဲ့ တစ်နေ့ရောက်မှ တန်ဖိုးသိတာမျိုး ပြန်ပြီး လွမ်းဆွတ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ ကျွန်မ လှည့်ထွက်သွားတယ်ဆိုကတည်းက ကျွန်မမှာ ခံနိုင်ရည်အင်အားမဲ့သွားလို့ပါ ဆက်ပြီး နာကျင်နေရမယ့် ဒဏ်ကို ထပ်ပြီး ခံနိုင်လောက်တဲ့ အင်အားမဲ့သွားတာပေါ့
မရှိမဖြစ်လို့ စ​ပြီး ပြောမိကတည်းက ချောင်ထိုးခံလိုက်ရတာ ကိုယ်ရှိမှန်း သတိမရတော့ဘူး ဘယ်လိုအမှားတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆက်ပြီးခွင့်လွှတ်နေမှာပဲလို့ တစ်ယူသန်တွေးပြီး ကိုယ့်ဖက်မငဲ့ပဲအမှားတွေဆက်တိုက်လုပ်ပစ်လိုက်တယ်
လုံလောက်တဲ့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေလဲ ရခဲ့ပြီးပါပြီ လှည့်ထွက်နိုင်ဖို့ အချိန်တစ်ခုပဲ လိုတော့တာ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်ပေါ့ ။